Andinin-tsoratra masina - Raha tsy manana fitiavana aho - Countdown ho an'ny fanjakana
Raha manana fanomezana maminany aho ka mahatakatra ny miafina rehetra sy ny fahalalana rehetra; raha manana ny finoana rehetra aho ka mamindra tendrombohitra, nefa tsy manam-pitiavana dia tsinontsinona aho. (Famakiana lamesa voalohany anio; 1 Kor 13: 2)
Tsy nisy taminay tao amin'ny Countdown to the Kingdom no afaka naminavina fa ity tranokala ity dia hatomboka amin'ny fotoana mitovy amin'ny fotoana hanombohan'ny fiangonana manerana an'izao tontolo izao ary hitady lalana ny olona. Tsy nisy tamintsika koa naminavina ireo taratasy sy voankazo mahavariana azontsika isan'andro avy amin'ny mpamaky eran'izao tontolo izao milaza amintsika ny fomba fihetsehan'ny fianakavian'izy ireo iray manontolo ary koa niova fo tamin'ny alàlan'ny hafatra teto. Tsy hitanay mialoha ihany koa ny resabe isan-kerinandro izay hanaraka ny asa ataontsika eto.
Fa izahay nanao fantaro mialoha fa ireo rehetra voalaza etsy ambony ireo dia hiteraka fanenjehana, fanesoesoana, ary tsy fahatakaran-kevitra - satria izany no mitranga na aiza na aiza no itoriana ny Tenin'Andriamanitra.
Araka ny nolazain'i Jesosy tao amin'ny Evanjely androany:
Inona no hanoharako ny olona amin'ity taranaka ity? Manao ahoana izy ireo? Toy ny ankizy mipetraka eny an-tsena izy ireo ary mifampiantso hoe: 'Notendrenay ny sodina ho anao, fa tsy nandihy ianao. Nanao hira fisaonana izahay fa tsy nitomany ianareo. '
Amin'ireo teny ara-paminaniana napetraka isan'andro eto Countdown dia henontsika ny fitarainan'ny Reny Sambatra avy amin'ireo mpahita manerana an'izao tontolo izao izay mbola tsy nifankahita mihitsy, izay miteny amin'ny fiteny samy hafa, mankalaza fombam-pivavahana samihafa… kanefa, milaza zavatra mitovy: manana isika Nampitandremana isika, fa tsy nihaino. Nihira fiderana ny lanitra, fa tsy nitomany izahay.
Fa tonga Jaona Mpanao-batisa tsy nihinan-kanina na nisotro divay, ka hoy ianareo: Manana demonia izy. Tonga ny Zanak'olona mihinana sy misotro, ka hoy ianareo: Indro, olona tendan-kanina sy mpimamo izy, sakaizan'ny mpamory hetra sy ny mpanota.
Na araka ny filazan'ny mpitsikera katolika iray vao tsy ela akory izay, ny sasany amin'ireo faminaniana eto dia tsy inona fa ny 'fanandroana vita batemy, ny faminavinan'ny End Times namidy ho "faminaniana", sy ny gnostisma miorina amin'ny tahotra.' Eny, izany no fomba fijerin'ny sasany amin'ireo "faharanitan-tsaina" amin'ny haino aman-jery katolika ankehitriny ny faminaniana, fanomezana avy amin'ny Fanahy Masina izay nohamafisin'ny Soratra Masina sy ny hadita. Fa raha tsy misy fon'ny zaza dia tsy azo atao ny miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra hoy i Jesosy — na mahatakatra ny zavatra mifandraika amin'izany.
Saingy tsy toy izany ny olona manetry tena izay tsy matahotra ny fampitahorana feno hatezerana an'ireo izay hitora-bato azy ireo mialoha ny hahalala tsara azy ireo. Toy ny Katesizy amin'ny Churc Katolikah mampianatra:
Notarihin'ny Magisterium an'ny Fiangonana, the sensus fidelium [fahatsapan'ny mpino] mahalala ny fomba hahitana sy handraisana ireo fanambarana ireo na inona na inona fiantsoana marina an'i Kristy na ireo olomasiny mankany am-piangonana. -n. 67
Eny, misy ny resabe; eny, misy ny eveka izay mandà ireo faminaniana navoaka eto; eny, ny klerjy sy ny mpahita ary ny mpahita dia olombelona avokoa ary mora tohina amin'ny fahadisoana sy tsy fahazoan-kevitra. Izay no antony maha-zava-dehibe ny tenin'i Masindahy Paul amin'izao fotoana izao rehefa very haingana ny fahalalahany ny fiangonana katolika:
Mahari-po ny fitiavana, tsara fanahy ny fitiavana. Tsy saro-piaro, ny fitiavana tsy mirehareha, tsy mirehareha, tsy mahalala fomba, tsy mitady izay hahasoa ny tenany izy, tsy mora tezitra, tsy mirehareha noho ny ratra, tsy faly amin'ny fanaovan-dratsy fa mifaly kosa ny fahamarinana.
Tsapanay fa izany no fisainana ilaina ilaina amin'ny fanohizana mamantatra ireo teny faminaniana voalaza ho voangona eto. Ilaina ny fahaiza-manavaka ny marary; tsy mendrika intsony izany fanesoana ny faminaniana izany; mba tsy hisy fialonana amin'ireo mpahita izay misarika ny saina bebe kokoa noho ny tenantsika; tsy hoe tsy mahalala fomba isika ary mirehareha amin'ny tombantombana sy ny hevitsika manokana momba ny fotoana; mba tsy hifaliantsika rehefa mahazo ny mpitsikilo ho voafitaka; ary rehefa misy izy ireo, dia tsy jerentsika ny ratra naterak'izany ary nivadika tamin'ny evekanay izahay. Ary izany, ambonin'izany rehetra izany, amin'ny fampiasana ny fanomezana fahaiza-manavaka, ny fitaovan'ny hadita masina, ary ny famakiana ny “famantarana ny fotoana”, dia mifaly amin'ny fahamarinan'ny tenin'ny Tompontsika sy ny Tompontsika isika, na dia sarotra heno aza izy ireo.
Ho antsika, izahay izay miasa ao ambadiky ny seho an'ity tranonkala ity dia manohy mifanakalo hevitra isan'andro handinihana tsara ireo fahasoavana nefa koa ireo loza ateraky ny fahalalana ny faminaniana. Betsaka ny teolojia, ny fikarohana, ny fandanjana ny fanambarana majistika sns izay mandeha amin'ny zavatra rehetra ataontsika. Raisinay ho zava-dehibe ny andraikitray. Averinay eto daholo ny zava-drehetra amin'ny alàlan'ny Soratra Masina, Lovantsary Masina, ireo Rain'ny Eglizy ary ny Magisterium ary vonona izahay hiaro an'io asa io amin'ireo fepetra ireo. Nahoana? Satria ny fanahy no resahina, fa tsy ny mpahita.
Fantatsika fa, toy ny tamin'ny andron'i Kristy, dia misy ireo izay haneso sy haneso ity asa ity - izay hanilika ireo mpahita ireo ho "manana", "tendan-kanina" ary "mpimamo", raha tsy izany. Tsy misy zava-baovao eto ambanin'ny masoandro: nitora-bato ny mpaminany taloha isika ary mitora-bato azy ireo ankehitriny. Voan'ny ny fanahin'ny fahaiza-misaina amin'izao androntsika izao, ny sasany dia very ny fahaizana mandre ny feon'Andriamanitra fotsiny. Mana-maso hijery izy ireo fa tsy mahita; manan-tsofina handrenesana izy, fa tsy hihaino. Tsy misy na inona na inona lazain'ireo mpahita anio izay mbola tsy tao anaty lohateny vaovao. Na izany aza, hoy ny Papa Francis,
Fa eto ihany koa ny antso iray nantsoin'i Md Paul hoe "fomba mbola tsara lavitra" noho ny faminaniana: ny lalan'ny fitiavana. Raha tokony ho latsaka ao anatin'ny fandriky ny fisaratsarahana izay apetrak'i satana ao amin'ny fianakaviantsika, ireo paroasy ary ny fiarahamonina misy antsika, isika izay mihaino ireo hafatry ny lanitra dia tokony ho endrika famindram-po, endrika fitiavana: faharetana, hatsaram-panahy, sns. Miezaka mitazona ny firaisankina isika, na dia tsy mitovy hevitra aza isika. Eny, ny fahafaha-tsy mifanaraka am-pilaminana ankehitriny dia very fotsiny tamin'ity taranaka ity izay nisy vokany mahatsiravina.
Amin'ny farany, hanjaka ny fahamarinana - ao anatin'izany ireo faminaniana eto amin'ity tranonkala ity izay azo itokiana, na mifanaraka amin'ny fahatsapantsika sy ireo teoria manokana na tsia. Satria, araka ny nolazain'i Jesosy tao amin'ny Evanjely androany:
Ny fahendrena dia manamarina ny zanany rehetra.
—Mark Mallett dia mpandray anjara amin'ny Countdown to the Kingdom ary mpanoratra an'i Ilay Teny Ankehitriny.
Jereo ihany koa avy amin'i Mark Mallett:
Fahamarinana, ary fahafatesan'ny mistery
Notoraham-bato ny Mpaminany
Mampangina ireo Mpaminany
Rehefa miantsoantso ireo vato
Posted in Avy amin'ny mpamatsy vola anay, Messages, Soratra Masina.
← Edson Glauber - Ao amin'ny…
Fanahy Kalifornia - Ny… →